Ndinofanira Kuiswa Tattoo Here? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba
Chii chinoita kuti vamwe vade kuiswa matattoo?
Mibvunzo ipi yaunofanira kufunga nezvayo?
Mazano api emuBhaibheri anoshanda panyaya iyi?
Mumwe mukomana anonzi Ryan anoti, “Ndinofunga kuti mamwe matattoo anoratidza unyanzvi hwekudhirowa huri muvanhu.”
Kuziva chinoita kuti vamwe vade kuiswa matattoo kungangokubatsira kuona kana zviine musoro kuti iwe uiswewo tattoo. Semuenzaniso, mumwe musikana achiri kuyaruka anonzi Jillian anoti: “Mumwe musikana wandaidzidza naye akashayikirwa naamai vake achiri mudiki. Saka paakanga ava pazera rekutanga kuyaruka, akaiswa tattoo yezita raamai vake nechekumashure pamutsipa wake. Ndinofunga kuti tattoo yakadaro inenge yakanaka.”
Pasinei nekuti zvii zvinoita kuti vamwe vade kuiswa matattoo, iwe unofanira kutanga wanyatsofunga usati waita kuti muviri wako unyorwe-nyorwe zvisingazodzimiki! Kana uri kufunga nezvekuiswa tattoo, mibvunzo ipi yaunofanira kufunga nezvayo? Uye mazano api emuBhaibheri anogona kukubatsira kusarudza zvine musoro panyaya iyi?
Matattoo anokanganisa sei utano? Mamwe mashoko ari panzvimbo yepaIndaneti yeMayo Clinic anoti: “Munhu paanoiswa matattoo anosara aine ronda, zvekuti anogona kupindwa neutachiona uye panogona kuva nemamwe matambudziko. Dzimwe nguva panzvimbo inenge iine tattoo yacho panoita mapundu anonzi magranulomas. Kuiswawo tattoo kunogona kuita kuti munhu ave neronda rinozosiya vanga rinenge rakafuta.” Nzvimbo yacho yepaIndaneti inowedzera kuti: “Kana pazvinhu zvinoshandiswa pakuisa tattoo pakasarira turopa twune chirwere, unogona kutapukirwawo nezvirwere zvakasiyana-siyana zviri muropa.”
Zvinokanganisa sei maonerwo aunoitwa nevamwe? Unofanira kuziva kuti vanhu vane zvavanofunga nezvako pavanoona zvaunenge wakaita muviri wako. Zvinoita kuti uonekwe semunhu akura mupfungwa kana kuti semunhu achiri pwere, semunhu anogona kuvimbwa naye kana kuti semunhu asina musoro. “Pese pandinoona munhu ane tattoo, ndinobva ndangomuisa muchikwata chevanhu vanonwa uye vanongoda zvemafaro,” anodaro mumwe musikana achiri kuyaruka anonzi Samantha.
Melanie, uyo ane makore 18, ane zvaakacherechedzawo panyaya iyi. Anoti “Inini ndinoona sekuti matattoo anokanganisa runako rwemunhu. Zvinoita sekuti vanhu vanoaiswa havadi kuonekwa zvavari chaizvo, saka vanozvivhara-vhara nematattoo.”
Kana waiswa tattoo, uchazongoramba uchiifarira here? Nekufamba kwenguva, kuchinja kunoita muviri kana kuti kuchembera kunogona kuita kuti tattoo isare isingacharatidziki zvakanaka. “Ndakaona kuti kana pakapfuura makore akawanda, matattoo akanyorwa pamuviri wemunhu anopedzisira asingachanakidzi kutarisa,” anodaro mukomana anonzi Joseph.
Allen uyo ane makore 21 anoti: “Kazhinji matattoo anobuda mufashoni. Pashure pemakore mashomanana munhu anogona kuzopedzisira asingachafariri tattoo yaanenge ainayo.”
Allen akataura pfungwa yakanaka. Nyaya iri pakuti vanhu sezvavanokura, maonero avo uye zvavanofarira zvinochinja, asi matattoo avo vanongoramba vainawo. Mumwe mukadzi anonzi Teresa anoti, “Handidi kuita zvinhu zvinozoita kuti ndizvidembe mune ramangwana, zvakadai sekuiswa tattoo, iyo inozoramba ichindiyeuchidza nezveupenzi hwandinenge ndakaita hwekuiiswa.”
Munhu anofunga semunhu akura anotora nguva yake achinyatsofunga nezvechisarudzo chaanenge achida kuita. (Zvirevo 21:5; VaHebheru 5:14) Saka funga nezvemazano emuBhaibheri anotevera, ayo anobatsira panyaya yematattoo.
VaKorose 3:20: “Imi vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti izvi zvinofadza kwazvo munaShe.”
Kana uchiri kugara nevabereki vako, zvii zvingaitika kwauri kana ukasateerera zvavanotaura?
1 Petro 3:3, 4: “Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze, kwokuruka bvudzi uye kwokupfeka zvishongo zvendarama kana kwokupfeka nguo dzokunze, asi ngakuve munhu akavanzika womwoyo akapfeka chipfeko chisingaori chomudzimu wakanyarara uye munyoro.”
Unofunga kuti nei Bhaibheri richinyanya kusimbisa nyaya ‘yemunhu akavanzika womwoyo’?
1 Timoti 2:9: ‘Vakadzi vanofanira kuzvishongedza . . . vaine mwero nepfungwa dzakanaka.’
Shoko rokuti “mwero” rinomborevei? Nei tingati nekufamba kwenguva munhu ane mwero ndiye anozonyanya kuyemurwa kupfuura anenge akanyorwa-nyorwa muviri?
VaRoma 12:1: ‘Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene, chinogamuchirika kuna Mwari, iro basa dzvene nesimba renyu rokufunga.’
Nei Mwari aine basa nemabatiro aunoita muviri wako?
Vakawanda pavakafunga nezvemazano aya, vakasarudza kurega kuiswa matattoo. Vakatowana chimwe chinhu chiri nani kupfuura matattoo. Teresa, ambotaurwa nezvake anoti: “Kana paine mashoko kana kuti sirogani yaunofarira chaizvo kana kuti munhu anokosha kwauri, ita zvinoenderana nemashoko acho kana kuti udza munhu wacho kuti anokosha zvakadii kwauri, pane kuti uiswe tattoo yemashoko acho.”
Tanga Wafunga Usati Waiswa Tattoo